Ndụmọdụ mgbe ị na-emejuputa LADM - Geofumadas
Ọktoba, 2016 cadastre, Apụta, My egeomates, Land Management
N'ọtụtụ ọrụ m sonyeere m, ahụwo m na ọgba aghara nke LADM kpatara abụghị nke metụtara ịghọta ya dị ka ọkọlọtọ ISO, mana ịhapụ ichebe echiche ya site na ọnọdụ teknụzụ nke teknụzụ ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, otu esi etinye ya n'ọrụ.
Ọ ga-edo anya na LADM abụghị ụkpụrụ nkịtị nke ISO, dịka ọ ga-abụ ọkọlọtọ maka njikwa metadata (ISO-19115), inye ihe atụ, ma ọ bụ ọkọlọtọ maka nyocha na nha (ISO-19156). Ha bụ otu ihe n'echiche na a na-etinye ha n'ọrụ na ọzụzụ pụrụ iche, ọ nweghị nke ụkpụrụ abụọ a ga-enwe ike ịghọta onye ọrụ nke na-abụghị onye geomatist raara nye ezigbo ọgụgụ nke ngalaba metụtara ya na nyocha nyocha; ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịmara otu esi eme udi ma ọ bụ jiri otu ụlọ ọrụ na-enwupụta; ọzụzụ dị mkpa iji mara otu esi etinye ụkpụrụ ISO.
Esemokwu nke ọkọlọtọ ISO chọrọ ijikwa ndị ọpụrụiche (azụmaahịa) bụ ihe mere ọkọlọtọ ISO-19152 nke a maara dika LADM siri ezigbo ike itinye n’ime ya; n'ihi na nchịkwa ala bụ isiokwu a na-etinye na ngalaba mmụta pụrụ iche sara mbara, ọrụ a ka na-arụ na mahadum ole na ole na-eji naanị otu ahụ.
Imata LADM kariri ighota uzo UML, klas, na subclasses si aru oru; achọrọ ka ị mara ezigbo nchịkwa nchịkwa ikike; ma site na ndekọ ndekọ na site na Cadastre na eserese, iwu nzuzo, iwu ọha na eze, ebubo iwu na nhazi. Kama ịmụ ihe iji gbanwee ntinye aha ndebanye aha na RRR, LADM chọrọ ka a gbalịsie ike ka ọ dị mfe dị ka o kwere mee, iji dozie ihe na-eme na ndụ dị adị, usoro ha nwetara dịka ọnọdụ na iwu mba si dị, ebe ọ bụ na RRR a bụ naanị nsonaazụ nke otu ndị ọzọ sụgharịrị site na notari, bụ ndị ji aka ha dee akwụkwọ na omume, nke ozi nke ọkara ya ghọtara site na asambodo cadastral, nke n'aka nke ya bụ nkọwa nke onye nyocha ahụ otu ugboro emere site n'eziokwu nke anụ ahụ, na, na mgbe arụ ọrụ siri ike nke nkọwa na ncheta echiche nke ihe ndị a chọrọ, onye tozuru oke nyere iwu ka onye ode akwụkwọ degara ya, iji mesịa ruo onye na-edekọ ihe nke ga-anwa ịkọwa ọzọ, ihe onye ode akwụkwọ ahụ dere, onye sụgharịrị ntozu ntozu, onye sụgharịrị notari ahụ, onye tụgharịrị uche nke ndị ọzọ, ịbanye na ndebanye aha ma ọ bụ ịgọnahụ ... ebe ahụ ma ọ bụrụ na ihe niile dị ụkwara adịghị mma na nkọwa ya!
Modelling bụ otu n'ime nsogbu ndị geofumados nke Beyond Catastro 2014 kwuru azụ na 1994, nke taa ga-adị nnọọ nkịtị. Ha na-akwụwa aka ọtọ n'eziokwu, ọ bụ ezie na ịme ngosi uwe bụ ihe ezi uche dị na ya, ha chefuru na nke a bụ uche kacha nta n'etiti ụmụ mmadụ. Nlereanya gụnyere mmega mkparita uka n'etiti ndị ọkachamara na-azụ ahịa: notari, onye nyocha, geomatist, onye nyocha, onye na-edekọ ihe, onye ga-amụta UML bụ isi; na ndị ọrụ kọmputa ndị ga-agbadata ịghọta ezigbo ndụ nke ihe ha na-anwa imezi.
Understandghọta nchịkwa ala pụtara ịmara banyere ụkpụrụ ndebanye aha na enwere usoro ụwa niile, ọbụlagodi na nnukwu akụkụ ọdịda anyanwụ ụwa:
Ofkpụrụ nke Ekpere, nke gbochiri itinye mmachi ma ọ bụ ụtụ isi itinye ego na akpaghị aka, ọ gwụla ma iwu ahụ nyere ikike, ụkpụrụ nkwenye nke na-edobe iwu ahụ nzukọ ndị isi obodo gafere ma ọ bụ ikike nwere ikike ịnwe ike iwepụ ya. dị ka nchegharị ma ọ bụ nkọwa mgbochi, ụkpụrụ mgbasa ozi nke na-egosi na onye ọrụ ọ bụla nke ihe ọma ga-ama na ngbanyetụ ma ọ bụ mpaghara ọchịchị pụrụ iche metụtara ngalaba ya, iji ma ọ bụ aka ọrụ, ụkpụrụ nke ọpụrụiche na-ekewa ikike ikike ya na cadastre, ukpuru nke ndebanye aha nke putara na ihe ala ala choro ka odi nma gabiga ikike inwe ikike iru iwu… ya mere itughari ala nke usoro iwu nke na-eme ka LADM kwusi ibu ihe eji egwu ya. atụmatụ ịme ihe siri ike ịkọwa n'agbanyeghị inwe profaịlụ UML nke ezi uche dị na ya ma ọ bụ nchekwa data ụkwara anụ ahụ; Bring webata ya n’ime usoro iwu, iwu, usoro na usoro chọrọ ihe karịrị ịbụ onye na-ede uri.
Mgbe m kwusịrị na Agustín Codazzi Institute n'ime usoro nke ICDE na ngosi m n'izu a na mba Central America, m ga-enwe ike ịgbaso isiokwu ahụ. Maka azịza ole na ole ugbu a na oji na ọcha:
Ndinam LADM ọ̀ na-agbanwe ụzọ anyị si edebanye aha?
Mejuputa ya Mba Ghọta ya na akụkụ. Mezie ya, ee ee.
Ọ dị mkpa maka ndị na - eji mpaghara azụmaahịa (azụmahịa) mara LADM?
Ghọta ya ee. Otu esi etinye ya n'ọrụ ...
Enwere ike ịmalite usoro ọhụụ na-enweghị itinye LADM?
Needkwesiri ịgbanwe iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ iji mejupụta LADM?
LADM ọ gharịrị ịbụ onye ISO?
Mgbe ị hụchara ụdị ngwa ọrụ dị iche iche, nsogbu nke idekọ ihe na cadastre, yana nnukwu ọnụ ahịa mmekọrịta, ọ ga-abụrịrị ogologo oge gara aga. LADM na-enyere aka ịkwado azụmaahịa ahụ, nke na-agbanweghi agbanwe, n'agbanyeghị na a ga-atụgharịrị akụrụngwa ahụ kwa afọ 10 ọ bụla.
Kedu ihe ndị ị ga - eme iji ghọta LADM?
Gụọ Beyond Catastro 2014, ghọta usoro cadastral, ghọta usoro notarial, ghọta usoro ndekọ, ghọta iwu gọọmentị pụrụ iche, kọwaa ISO-19152 dabere na nke a, mụta banyere ahụmịhe, nke ọma na nke ọma tupu ị gụọ na ...
Kedu ihe ndị ga - eme iji weezigharịa profaịlụ LADM?
Were profaịlụ zuru oke, kewaa ya na uzo ano, nọdu ndi mmadu site na iwu iwu iji wulite akwukwo BA_Unit, nodu ndi cadastre ka ha wulite onu ogugu na onodu ihu igwe, nodu ala iji wulite mmekorita nke onwe, kwue a iwu nke iwu ọha na eze ma wuo faịlụ na usoro, jiri nwayọọ nwayọọ lelee iwu ndị ọzọ, mee ka isi iyi dị mfe.
Kedu ihe ndị a ga - eme iji wee tinye LADM n'usoro ọhụụ?
Kwadoro profaịlụ nghazi zuru oke, nke ka mfe ka mma. Wụpụta profaịlụ nke anụ ahụ, tinye ngwa maka azụmahịa na njikwa nsụgharị, gbanwee usoro, mepee ma ọ bụ mezie ngwa ọrụ ahụ na usoro nke na-echekwa usoro ndụ ... ọ bụrụ na ọ ka mma ịgbanwe usoro dabere na usoro iwu nke mba ahụ.
Ebee ka ị ga - ahụ ihe atụ nke mmejuputa LADM na mpaghara Hispanic?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ mmega ahụ oge ochie na CCDM tupu akpọ ya ọkọlọtọ ISO-19152, ọ bara uru ịhụ SINAP na Honduras. Ọ bụghị naanị na SURE Unified Registry Sistemụ ọrụ teknụzụ, mana iwu nke nyere ndụ na iwu ihe onwunwe na iwu ojiji ala. Na okwu ọkara, ọ bara uru ịhụ mmalite nke SURE, nke bụ usoro na-aga n'ihu n'okpuru mmekọrịta ọha na eze na nzuzo, ikekwe ya bolckchain.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ngwa ọrụ gọọmentị nke na-akwado LADM, ị nwere ike ịhụ SIGIT na Puerto Cortés, Omoa Puerto Barrios obodo dị n'etiti Guatemala na Honduras, yana ngwa weebụ ndị ahịa na OpenLayers, mpempe akwụkwọ cadastral nwere ike iwepu yana ndebanye aha nke ụlọ na-elekwasị anya jikọtara etiti etiti mba. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ya ike itinye ya dịka o kwesiri, ihe nlere ahụ bụ ego geofumed, nke nwere ike iweta mkpụrụ osisi dị nso na ọnọdụ El Salvador.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ngwa ọrụ maka mmezi ọchịchị obodo na ọrụ GML / WFS nwere usoro nke mba, ị nwere ike ịhụ Municipal SIT na Association of Municip nke Honduras, etolite na QGIS na ọkwa nke ndị ahịa, gbakwunyere mkpịsị akwụkwọ osisi ndị ọzọ maka interoperability ọbụna na BentleyMap V8i na-enweghị M-nlereanya
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ usoro na-aga n’ihu, na-ekwe nkwa nke ukwuu, dịka ihe Chineke nyere n’iwu, lee ahụmịhe nke Agustín Codazzi Institute na Superintendency nke Ndebanye aha na Notaries, Colombiakpụrụ Colombia Platanized. Iji INTERLIS iji mee ka mmejuputa iwu, ezigbo ihe ịma aka sitere na imeghe emeghe na nnabata ESRI na IDE nke na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ala nchịkwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ mmega ahụ na-ekwe nkwa, nke ga-ewe oge ụfọdụ ma emesịa jiri usoro eme ka ọ pụta ìhè, ana m atụ aro iso mmepe SIICAR2 na Nicaragua.
Ọ bụrụ n’inwe obi abụọ ... enwere email m.
Previous Post«Previous Bentley Systems ọkwa finalists maka mmụọ nsọ 2016
Next Post Microstation Jikọọ Edition - Ga-emegharịrị na interface ọhụrụNext »